Nepali Rajneeti | मेरो सरकारका पालामा देशले प्र’गति गरेको थियो, एमाले माथि ष’ड्य’न्त्र गरियो !
मेरो सरकारका पालामा देशले प्र’गति गरेको थियो, एमाले माथि ष’ड्य’न्त्र गरियो !
भाद्र ३०, २०७८ बुधबार १८ पटक हेरिएको
प्रमुख प्रतिप’क्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले निष्प’क्ष भएर काम गर्न न’सकेका कारण सं’सद् अव’राेध गरिएको बताउनुभएको छ ।
नेकपा एमाले झापाले आज मङ्गलवार बिर्तामोडमा आयोजना गरेको अगुवा कार्यकर्ता भेलामा उहाँले एमालेमाथि ष’ड्य’न्त्र गरिएकाले प्रति’निधि सभामा अव’राेध गर्नु आफूहरूको बाध्य’ता भएको बताउनुभयो ।
आफ्नो नेतृत्वमा गठन भएको सरकारका पालामा देशले प्रग’ति गरेको, व्यापा’र घाटा घटाएको र निर्यात बढाएको उहाँको भनाइ थियो ।
आउँदाे चुनावदेखि एमाले पुनः स’त्तामा फर्किने अध्यक्ष ओलीले बताउनुभयो । ‘हाम्रो वि’जय यात्रालाई कसैले रोक्न सक्दैन’, उहाँले भन्नुभयो । एमा लेलाई विभा’जनको खासै अ’सर नपरेको स्पष्ट पार्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘पि’लो नि’चोरेर एमालेको व’जन घट्दैन, पतकरले कोसीको भेल थु ‘निँदैन ।
अध्यक्ष ओली आजै पार्टी कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्न काठमाण्डाैबाट यहाँ आइ पुग्नुभएको हो । यो खब उज्यालो अनलार्इनबाट साभार गरियको हो । यस्तै यता वि नियोजन विधेयक २०७८ पारित नभएपछि सरकारले राज्य कोषबाट भाेलि बुधवारदेखि ख’र्च गर्न नपाउने भएको छ । प्रतिनि’धि सभाको आज मङ्गलवारको बैठकपछि स’ङ्घीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चार’कर्मीसँग कुराकानी गर्दै अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले केही दिन सरकारको ख’र्च रोकि’न सक्ने जानकारी दिनुभयो ।
नेपालमा सरकारको ख’र्च नै रोकि न लागेको सम्भवतः यो पहिलो पटक हो । अर्थ’शास्त्रीय भाषामा यसलाई ‘बजेट हो’लिडे’ का रूपमा लिइन्छ । अघिल्लो सरकारले अ ध्या’देशबाट गएकाे जेठ १५ गते चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको थियो । अध्या’देशबाट ल्याइएको बजेट गएकाे साउन ४ गते स ‘ङ्घीय संसदमा पेस भएको थियो ।
अध्या’देश ६० दिनभित्र पारित गर्नुपर्ने प्राव’धान छ । त्यस आधारमा भाेलि बुधवार सम्म विनि’योजन विधेयक पारित गरि’सक्नुपर्ने थियो । प्र’तिनि धि सभामा प्रमुख प्र तिपक्षी दलले निरन्तर अव’रोध गरिरहेको छ । आज वि नियोजन विधे’यक माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव मात्रै स्वी’कृत भएको छ । अर्थ मन्त्री शर्माले केही दिन सरकारको खर्च रो’किन सक्ने जानकारी दिँदै नियमित प्रक्रिया बाटै बजेट पा’रित गरिने बताउनुभयो ।
आठ महिनाको शिशुलाई आमाले काखमा राखेर समातिन्, बाबुले घाँ’ टी रे’टे !
प्रचण्ड राम्रो सम्धी, ससुरा, ज्वाइँ भए पनि धो’केबाज नेता हुन् !